Laba laaliyeyn ah 26 inch baaskiil koronto | ebike Shuangye
Bogga ugu weyn Products baaskiil koronto baaskiilka buurta Joojinta laba-lab ah 26 inch baaskiil koronto A6AH26-S
Mooto: 36V / 48V 250W / 350W / 500W / 750W Hub Moto
Batariga: Batariga Lithium 36V / 48V 8Ah / 10Ah / 13Ah
Cayrinta: Labada shaqo ka joojinta (F / R)
Baaskiil koronto oo ujeedo leh ayaa wali umuuqda sida baaskiil laakiin wuxuu u eg yahay jet. Tan baaskiil koronto isticmaal laba laalitaan, 36v 350w burush hub la'aan iyo 36v 10ah batari qarsoon.
Muuqaal farabadan oo LCD ah Naqshadeynta iyo soo saarida warshadeena, si sahlan oo loo xakamayn karo tayada, waxay muujin kartaa Fog, Mileage, Heerkulka, Voltage iyo wax kale. Waxaad si sahlan u isticmaali kartaa buuggan.
Batariga qarsoodiga ah Waxaan u adeegsanaa nashqadeynta batteriga noocan ah baaskiil koronto ku shaqeeya. Qaab-dhismeedka ebike waxaa qaabeeyay oo soo saaray warshaddeenna. Aad u khaas ah. Dadka badankood ma aqoonsan doonaan inay tahay baaskiil koronto marka ugu horeysa ee ay arkaan. Sanduuqa batteriga waa laga saari karaa si aad ugu dallacdo baaskiil ama qolkiina si gooni ah.
Qalabka fareebka hore iyo kan danbe ee 160 Ka ilaali xaalad deg-deg ah oo leh masaafada nasashada ee 3. Isku habee kabaalka fareebka kaas oo ah koronto goynta markaad braking qaadato. Badbaadinta baaskiilada ayaa si weyn loo hagaajiyay.
Mashiinka aan ciriir lahayn Waxaad ku siisaa 250W / 350W xawaare sare oo koronto la'aan ah, xawaaraha ugu badan waa illaa 25-30km / h. Waa awood badan tahay inaadan ka walwalin buuraha ama dabaysha.
Baaskiil koronto oo dheeri ah: Baaskiil koronto koronto oo dheeri ah oo 26 inch ah, gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida leh ee isku dhafan, 26/28 inji baaskiil koronto magaalada ah, batariga dhalada ee baaskiilka korantada
Tags:baaskiil koronto 26 inch baaskiil koronto Baaskiilada korontada laga saaro laba
Ka hor: Mens cusub baaskiilada cusub ee korantada A6AB26
Next: 48V500W baaskiilad koronto ah A6AD26